Boqortooyada Sucuudiga Oo Dil Ku Fulinaysa Saddex Wadaad. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Boqortooyada Sucuudiga Oo Dil Ku Fulinaysa Saddex Wadaad.
May 21, 2019 - By: HORSEED STAFF
Boqortooyada Sucuudi carabiya ayaa qorshaynaysaa inay dil ku fuliso saddex wadaad oo caan ka ah dalkaasi, kuwasoo lagu soo eedeeyay arrimo argagixiso.
Wadaadan oo kala ah Salman al-cawdah, Cawwad al-Qarni and Caoli al-Cumari ayaa dilka lagu fulin doonaa bisha barakaysan ee Ramadan ka dib sida laga soo xigtay ilo dowladda iyo mid ka mid ah qoysaska culumada la haysto.
Shiikh Salmaan Alcowda oo aqoonyahan iyo wadaad caan ka ah Sucuudiga ayaa la xiray bishii September 2017, kadib markii uu ka horyimid xayiraadii ay Xulufada Sucuudiga iyo Imaraadku ay ku soo rogeen wadanka Qadar.
Labada wadaad kale ayaa la xiray isla bishii September ee Sanadkii 2017
Saddex Wadaad oo maxkamad Sugayaal ah oo lagu hayaa xabsi ku yaal Magaaladda Rayaad.Maxkamadayntooda ayaa la filayay inay bilaabato Bishan May 1deedii, hase Yeeshee dib loo dhigay iyadoo la sheegin waqtiga dib loo qaban doono Maxkamada.
Shirka Maal-gashiga Puntland oo ka furmay Garoowe.